RAVALOMANANA MARC : Miafin’endrika ao ambadik’ireo olom-piangonana indray ?
Hatramin’ny faran’ny taona ka hatramin’izao dia tsy mbola naharenesam-peo ny Kandida Ravalomanana Marc manoloana ny korontana kotrehin’ny mpomba azy etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mey. 7 janvier 2019
Na inona na inona anefa lazaina, tompon’andraikitra amin’io korontana lava tsy misy farany eo amin’ny kianjan’ny 13 Mey io izy ary tsy azo lavina ny maha ao an-damosin’ireo mpitari-tolona azy. « Ny biby tsy manan-doha, tsy mandeha », hoy ny fitenenana. Tsy mahagaga izany ! Efa fomban-dRavalomanana Marc ny miafina ao ambadiky ny olona iray manana ny anjara toerany eto amin’ny firenena hanafenana ny toetra ratsiny.
Tsy mifidy hiraisana tsikombakomba ny lehilahy fa na olon-tsotra, na olom-panjakana, eny fa hatramin’ny mpitondra fiangonana aza dia tapitra gejain’ity rangahy ity avokoa hiarovana ny tombontsoany sy hampanjakany ny fitiavan-tenany.
Tany amin’iny faritra avaratry ny Nosy iny, ohatra, dia fantatra fa tsy nisy navela nahazo an’ireny famatsiam-bola ho an’ny fampandrosoana toy ny fananganana sekoly, fanamboarana toho-drano, fananganana hopitaly ireny nandritra ny fotoana nitantanany ny firenena ny taona 2002 ka hatramin’ny 2009 raha tsy nandalo tamin’ireo olony mpitantana ny fiangonana tany an-toerana. Ireny no nentin-dRavalomanana nanafenana ny maha « amboadia mitafy hodi-janak’ondry azy ». Fony izy nanao sesitany ny tenany tany Afrika Atsimo dia mbola olom-piangonana koa no nampiasainy hanakorontana ny firenena.
Re siosio amin’izao araka ny nambaran’ny mpanara-baovao fa mbola miafin’endrika sy mametraka ny dian-tanany ao ambadiky ny filohan’ny FJKM indray Ingahy Ravalomanana Marc. Porofon’ireny ny « Pi-maso » ho an’ny HCC nataon’ity filohan’ny FJKM ity nandritra ny lahateny izay nataony tamin’ny sabotsy lasa teo izay nilaza fa « tsy misy marina izay tsy hiseho... ». « Mampiahiahy », hoy ny mpanara-baovao, ny nanaovana iny fanambaràna iny andro vitsy mialoha izao hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana na ny HCC ny vokatra ôfisialy anio izao. Ny mahagaga ihany koa dia niantso fitoniana ity filohan’ny Fjkm ity amin’ny maha raiamandreny am-panahy azy saingy tsy mba noresahany na nasiany teny mihitsy ny fampitsaharana tsy misy hatak’andro ny fitokonana etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mey.
Lesoka goavana isan’ny nankahalan’ny vahoaka malagasy an-dRavalomanana Marc nandritra ny fotoam-pitondrany ny fampifangaroana ny raharaham-pirenena amin’ny raharaha hafa toy ny raharaham-piangonana kanefa hatramin’izao dia toa mbola io hatrany no ijoroany. « Laika » ny fanjakana ka tsy tokony hijabaka amin’ny raharaham-piangonana ary ny fiangonana ihany koa dia tokony ho toy izany.